गाउँ गाउँमा बैंक खुले, तर कर्जा लिनुपर्दा मिटर व्याजबाटै ! ~ Banking Khabar
गाउँ गाउँमा बैंक खुले, तर कर्जा लिनुपर्दा मिटर व्याजबाटै !
बैंकिङ खबर । संसारभरको सम्पत्तिको बराबर वितरण हुने हो भने हरेक कुनाका मानिसलाई आरामले जिन्दगी विताउन पुग्छ । तर, यहाँ सम्पत्तिको समान वितरण छैन । केही मुलुक अत्याधिक विलाशी जिवन विताइरहेका छन् भने कतिपय देशमा खानकै लागि पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । देशको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, पूर्वाधारको विकास, खानीजन्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय लगायतका हिसाबले अमेरिकी, अष्ट्रेलिया र युरोपी देशहरु प्रायः धनी छन् भने अफ्रिकी र एसियाली मुलुक गरीब छन् । गरीब देशहरु कसरी आम्दानी बढाउने र सामान्य जीवन विताउने भन्नेमा केन्द्रित भइरहँदा विकसित मुलुकहरु विभिन्न नयाँनयाँ परीक्षण, प्राविधिक विकास लगायतमा खर्च गरिरहेका छन् । गरीवहरुका लागि साहु महाजन, सहकारी एवं लघुवित्तले मात्रै लगानी गरेको पाइन्छ । के गरिव भएकै कारण महंगो व्याजमा यस्ता क्षेत्रबाट कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता हो ? अथवा बैंकहरु धनीका लागि मात्रै हुन् ? यी प्रश्नहरु आजका दिनमा पनि जस्ताको तस्तै उठीरहेको छ ।